Akwụkwọ iri kacha elu maka ndị njem njem | Akụkọ Njem
Lola curiel | | General, Oge ntụrụndụ, njem
Ga njem bụ otu ihe omume na-atọ ụtọ ma baa ọgaranya n'ụwa. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, a na-amanye anyị ịhapụ ọchịchọ anyị inyocha n'ihi mkpa ọ dị ịnọ na ebe a kapịrị ọnụ ma ọ bụ n'ihi enweghị ezumike. Gụ maka ebe dịpụrụ adịpụ na mbara ala ma mụta banyere ahụmịhe ndị njem ndị ọzọ, bụ ụzọ dị mma iji gbuo ahụhụ ahụ wee bido ịhazi ụzọ ndị ọzọ ị ga-eso. M hapụrụ gị post a ndepụta ndị bụ maka m akwụkwọ iri kachasị mma maka ndị njem na - atụ uche ya!
1 Thezọ kacha nso
3 Suite ndị Italia: Njem gị na Venice, Trieste na Sicily
4 Ọwụwa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia
5 Nzube Jupita
6 Ntuziaka maka ndị njem na-emeghị ihe ọjọọ
7 Onyunyo nke Silk Road
8 Trizọ Ise Ise na Hel: Adventures with Me and That Other
9 Kwupụta ụzọ ọhịa
10 Akwụkwọ ozi atọ sitere na Los Andes
Thezọ kacha nso
Afọ 12 ka nke a gasịrị, onye nta akụkọ Manuel Leguineche na-akọ akụkọ na "Thezọ kacha nso" ahụmahụ ya biri dị ka akụkụ nke Mgbanwe World Record njem, njem nke malitere site na peninshula na nke mere ka ndị na-akwado ya gaa ihe karịrị 35000 kilomita na 4 x 4. Ọzọkwa bụ akụkọ banyere nwata nwoke, onye nwere oke ọchịchọ karịa ahụmịhe, zọpụtara onwe ya iji mezuo nrọ: "Gagharịa gburugburu ụwa".
Njem ahụ, nke were ihe karịrị afọ abụọ, gafere Africa, Asia, Australia na America, n’oge 29 mba dị n’okporo ụzọ ahụ nọ na-alụ agha. Obi abụọ adịghị ya, akụkọ na-akpali akpali na ihe a ga-agụ maka ndị hụrụ ọhụụ mara mma.
Lee ugbu a na Amazon
A kpochapụwo nke akwụkwọ njem, akụkọ nke onwe nke na - amalite site na nwata nke onye dere ya, Bruce Chatwin.
Ọ bụrụ na ị na-achọ rigor, nke a nwere ike ọ gaghị abụ akwụkwọ ị na-achọ, maka na oge ụfọdụ eziokwu agwakọta na-echeta na akụkọ akụkọ ifo. Mana ọ bụrụ na ị gbalịa, ị ga-anụ ụtọ njem Chatwin na ị ga - achọpụta ihe kacha mkpa Patagonia, otu n’ime ebe anwansi na ebe puru iche na uwa.
Suite ndị Italia: Njem gị na Venice, Trieste na Sicily
Akwụkwọ edemede Javier Reverte lekwasịrị anya na njem, bụ A na-atụ aro ka ị rọọ nrọ nke ebe kachasị mma na-ahapụghị ụlọ.
Suite ndị Italia: Njem gaa Venice, Trieste na Sicily fọrọ nke nta ka ọ bụrụ edemede edemede nke Reverte bi na ya. na-akpọrọ anyị gaa na ala ndị mara mma ma na-adọrọ adọrọ nke Italytali. Tụkwasị na nke ahụ, a na-agwakọta ihe ndekọ njem na akụkọ na akụkọ ihe mere eme nke na-enyere aka ịghọta mpaghara ahụ nke ọma.
Ọwụwa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia
Nye na-echetụbeghị echiche banyere imebi otu anụ ahụ? Onye edemede nke Dawn na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Carmen Grau, kpebiri ịga n’ihu ma kwụsị ọrụ ya iji bie ndụ ahụmahụ ọ na-atụ anya ya. Ọ hapụrụ ndụ ya na Barcelona ma kwadebe ya na akpa azụ, ọ malitere njem dị ukwuu.
Ọ gagharịri ọnwa asaa Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Burma, Hong Kong, Malaysia, Sumatra, na Singapore. N'akwụkwọ ya, ọ na-akọrọ nkọwa niile nke njem ya, njem na ụgbọ mmiri, ụgbọ ala, ụgbọ oloko na abalị na ụlọ mbikọ.
Na nrọ nke Jupiter onye nta akụkọ Ted Simon na-akọ ahụmahụ ya na-ejegharị na ụwa n'ụgbọala Triumph. Simon malitere njem ya na 1974, site na United Kingdom, n'ime afọ anọ ọ gbakọtara ngụkọta nke mba 45. Akwụkwọ a bụ akụkọ banyere ụzọ ọ gafere na mpaghara ise. Y’oburu na inwere ndi choro nku, i ghaghi ichefu ya!
Ntuziaka maka ndị njem na-emeghị ihe ọjọọ
Atụla anya ụdị njem ị ga-ahụ mgbe ị na-agụ akwụkwọ a. Mark Twain, onye nwere ike ịmara gị nke ọma dịka onye okike Tom Sayer, rụrụ ọrụ na 1867 maka akwụkwọ akụkọ Alta California. N'afọ ahụ, ọ hapụrụ New York njem njem njem ahaziri ahazi mbụ na akụkọ ntolite nke oge a na Twain bịara dee usoro ihe omume na arịrịọ nke akwụkwọ akụkọ.
Na nduzi maka ndị njem na-emeghị ihe ọjọọ na-anakọta njem ahụ dị ukwuu nke ga-esi na United States gaa Ala Nsọ na, na nkowa ya, ọ na-akọ njem ya n'akụkụ ụsọ Oké Osimiri Mediterenian na site na mba ndị dịka Egypt, Greece ma ọ bụ Crimea. Isi ihe ọzọ dị mma nke akwụkwọ a bụ ụdị onwe Twain, nwere ọdịdị ọchị nke ahụ na-eme ka ịgụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Onyunyo nke Silk Road
Colin Thubron bụ onye edemede dị mkpa maka akwụkwọ njem, otu n’ime ndị njem ahụ ike na-agwụ ike nke gafere ihe karịrị ọkara ụwa ma mara ka esi agwa ya nke ọma. Enweela onyinye ya n'ebe niile ma sụgharịa ya n'ihe karịrị asụsụ 20. Akwụkwọ ndị mbụ edepụtara na ụdị a lekwasịrị anya na mpaghara Middle East na, emesia, njem ya gafere na mbụ USSR. A) Ee, ihe omuma akwukwo ya nile na-aga n'etiti Asia na Eurasia ma hazie ezigbo X-ray nke mbara mbara ala a ebe esemokwu, mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụkọ ntolite gwakọtara ọdịnala na ọdịdị ala.
Na 2006, Thubron na-ebipụta Onyinyo nke Silk Road, akwukwo nke o kesara njem ya di egwu na uzo ala kachasi elu nke uwa. Ọ hapụrụ China wee gafee ọtụtụ Eshia iji ruo ugwu nke Central Asia, ihe karịrị puku kilomita iri na otu na oge nke ọnwa 8. Ihe kacha mma gbasara akwụkwọ a bụ uru ahụmịhe nke onye dere ya na-enye ya. Ọ gara aga ọtụtụ akụkụ nke mba ndị ahụ ma, na-alọghachite ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, ọ bụghị naanị na ọ gbaghachitere akụkọ ihe mere eme nke ụzọ dị oke mkpa maka mmepe nke azụmaahịa ọdịda anyanwụ, ọ na-enye atụnyere na ọhụụ banyere etu mgbanwe na ọgba aghara siri gbanwee Mpaghara.
Trizọ Ise Ise na Hel: Adventures with Me and That Other
Martha Gellhorn bụ onye ọsụ ụzọ na-ede akụkọ agha, onye nta akụkọ America ahụ gbara akụkọ banyere esemokwu nke narị afọ nke XNUMX Europe, kpughere Agha IIwa nke Abụọ, bụ otu n'ime ndị mbụ na-akọ banyere ogige ịta ahụhụ Dachau (Munich) na ọbụna hụrụ mgbe Normandy rutere.
Gellhorn gabigara ọnọdụ kachasị dị ize ndụ na mbara ụwa ma ihe egwu dị mgbe niile na njem ya, na Trizọ Ise Ise na Hel: Adventures with Me and That Other, na-ekwu maka nsogbu ndị ahụ, bụ a ichikota nke kacha mma nke njem ya kacha njọ emi enye etịn̄de nte enye okosobode ndịk ye afanikọn̄ ye unana idotenyịn. Akwụkwọ a na-anakọta njem ya site na Ernest Hemingway na China n'oge Agha Sino-Japanese nke Abụọ, njem ya site na Caribbean na-achọ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri German, ụzọ ya si Africa na ụzọ ọ gafere Russia nke USSR.
Kwupụta ụzọ ọhịa
En Kwupụta ụzọ ọhịa Onye edemede America bụ Jon Krakauer na-akọ akụkọ banyere Christopher Johnson McCandless, nwa okorobịa si Virginia nke 1992, mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na History na Anthropology na Mahadum Emory (Atlanta), ekpebie ịhapụ ego ya niile ma gaa njem n'ime omimi nke Alaska. Ọ hapụrụ n'ekwughị ndị ọzọ ma jiri ngwa ọgụ ọ bụla. Ka ọnwa anọ gachara, ndị dinta hụrụ ozu ya. Akwụkwọ ahụ kọwaghị nanị njem McCandless, na-abanye n'ime ndụ ya na ihe kpatara ya nke mere ka otu nwa okorobịa si n'ezinụlọ bara ọgaranya mee mgbanwe dị otú ahụ n'ụzọ dị egwu.
Akwụkwọ ozi atọ sitere na Los Andes
Mpaghara ugwu nke Peruvian Andes bụ otu n'ime ebe kachasị amasị ndị hụrụ ihe okike na njem nlegharị anya. N'ime akwụkwọ ozi atọ sitere na Andes, onye njem ahụ bụ Patrick Leigh Fermor na-akọrọ ụzọ ya site na mpaghara a. Ọ malitere njem ya na obodo Cuzco, na 1971, wee site ebe ahụ gaa Urubamba. Ndị enyi ise soro ya, ma eleghị anya ụdị mmadụ ahụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na akụkọ a. Ndị njem ahụ dịgasị iche iche, nke gụnyere onye na-ede uri nke nwunye ya, onye ọkachamara na Switzerland na onye na-egwu egwuregwu, onye na-ahụ maka ọdịmma mmadụ, onye na-agụ akụkọ banyere Nottinghamshire, duke na Fermor. N’akwụkwọ ahụ, ọ kọtara ahụmihe niile otu ahụ nwere, otu ha siri kwado onwe ha n’agbanyeghi na ha dị ezigbo iche na etu ọhụụ ha maka ụwa na ụtọ ha n’aga njem siri mee ka ha dị n’otu.
Mana gafere akụkọ ahụ, na enweghị mgbagha mara mma, Akwụkwọ ozi atọ sitere na Andes Gut njem dị egwu nke si obodo, site na Cuzco, ruo ebe kachasị dịpụrụ adịpụ na mba ahụ. Ndị njem ise a si Puno gaa Juni, na nso Ọdọ Mmiri Titicaca, ma si Arequipa gawa Lima. Peeji nke akwụkwọ a ga-akpọrọ gị gaa ebe nke ọ bụla Enweghị akụkọ kachasị mma iji mechie ndepụta a nke akwụkwọ kacha mma 10 maka ndị njem!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oge ntụrụndụ » Akwụkwọ 10 kachasị maka ndị njem